BlitzCoin စျေး - အွန်လိုင်း BLITZ ပွောငျး
စျေးနှုန်းနှင့် ပွောငျး ကို BlitzCoin (BLITZ)
သငျသညျ (ကစျေးနှုန်းအရ) ပွောငျး လိုအပ်နေသောကြောင့်သင်ဒီမှာဖြစ်ကောင်းဖြစ်ကြ BlitzCoin (BLITZ) နိုင်ငံခြားငွေကြေးသို့မဟုတ်အွန်လိုင်း cryptocurrencies မှ. ထက်ပိုမိုပြောင်းလဲနိုင်ဖို့ထက်ပိုမိုလွယ်ကူဘာမှမရှိဘူး 170 ငွေကြေး နှင့် 2500 cryptocurrencies ဤတွင်, အွန်လိုင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ငွေကြေး ပွောငျး ကိုသင်အခုလုပ်ကူညီပေးပါမည်။ မရင့်ပြောင်းလဲဖို့အခမဲ့ခံစားရ BlitzCoin ဒါပေမယ့်လည်းမဆိုအခြားရရှိနိုင်ငွေကြေး။
Market ကဦးထုပ်: $717 089.00
သငျသညျမှာအားလုံးကြည့်ရှုရန်အဘို့အဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါကစိတ်ဝင်စားဖို့ဖြစ်လိမ့်မည် လဲလှယ်၏နှုန်းထားများ BlitzCoin တဦးတည်းစာမျက်နှာပေါ်တွင်.
BlitzCoin များ၏စျေးနှုန်းများ ကမ္ဘာ့အဓိကငွေကြေး
BlitzCoinBLITZ သို့ အမေရိကန် ဒေါ်လာUSD$0.243BlitzCoinBLITZ သို့ ယူရိုEUR€0.206BlitzCoinBLITZ သို့ ဗြိတိသျှ ပေါင်GBP£0.186BlitzCoinBLITZ သို့ ဆွစ် ဖရန့်CHFSFr.0.221BlitzCoinBLITZ သို့ နော်ဝေ ခရိုဏာNOKkr2.17BlitzCoinBLITZ သို့ ဒိန်းမတ် ခရိုဏာDKKkr.1.53BlitzCoinBLITZ သို့ ချက်ခိုရိုနာCZKKč5.37BlitzCoinBLITZ သို့ ပိုလန်ဇလော့တီPLNzł0.905BlitzCoinBLITZ သို့ ကနေဒါ ဒေါ်လာCAD$0.321BlitzCoinBLITZ သို့ ဩစတြေးလျ ဒေါ်လာAUD$0.34BlitzCoinBLITZ သို့ မက္ကဆီကို ပီဆိုMXNMex$5.39BlitzCoinBLITZ သို့ ဟောင်ကောင် ဒေါ်လာHKDHK$1.88BlitzCoinBLITZ သို့ ဘရာဇီး ရီးယဲBRLR$1.3BlitzCoinBLITZ သို့ အိန္ဒိယ ရူပီးINR₹18.16BlitzCoinBLITZ သို့ ပါကစ္စတန် ရူပီးPKRRe.40.95BlitzCoinBLITZ သို့ စင်္ကာပူ ဒေါ်လာSGDS$0.333BlitzCoinBLITZ သို့ နယူးဇီလန် ဒေါ်လာNZD$0.371BlitzCoinBLITZ သို့ ထိုင်းဘတ်THB฿7.55BlitzCoinBLITZ သို့ တရုတ် ယွမ်CNY¥1.69BlitzCoinBLITZ သို့ ဂျပန်ယန်းJPY¥25.89BlitzCoinBLITZ သို့ တောင်ကိုရီးယား ဝမ်KRW₩287.87BlitzCoinBLITZ သို့ နိုင်ဂျီးရီးယားနိုင်းရာNGN₦93.97BlitzCoinBLITZ သို့ ရုရှ ရူဘယ်RUB₽17.8BlitzCoinBLITZ သို့ ယူကရိန်း ဟီရီဗင်းညားUAH₴6.66
BlitzCoinBLITZ သို့ BitcoinBTC0.00002 BlitzCoinBLITZ သို့ EthereumETH0.000632 BlitzCoinBLITZ သို့ LitecoinLTC0.00446 BlitzCoinBLITZ သို့ DigitalCashDASH0.00267 BlitzCoinBLITZ သို့ MoneroXMR0.00272 BlitzCoinBLITZ သို့ NxtNXT18.92 BlitzCoinBLITZ သို့ Ethereum ClassicETC0.0358 BlitzCoinBLITZ သို့ DogecoinDOGE70 BlitzCoinBLITZ သို့ ZCashZEC0.00294 BlitzCoinBLITZ သို့ BitsharesBTS7.47 BlitzCoinBLITZ သို့ DigiByteDGB7.76 BlitzCoinBLITZ သို့ RippleXRP0.862 BlitzCoinBLITZ သို့ BitcoinDarkBTCD0.00836 BlitzCoinBLITZ သို့ PeerCoinPPC0.805 BlitzCoinBLITZ သို့ CraigsCoinCRAIG110.53 BlitzCoinBLITZ သို့ BitstakeXBS10.34 BlitzCoinBLITZ သို့ PayCoinXPY4.23 BlitzCoinBLITZ သို့ ProsperCoinPRC30.44 BlitzCoinBLITZ သို့ YbCoinYBC0.00013 BlitzCoinBLITZ သို့ DarkKushDANK77.85 BlitzCoinBLITZ သို့ GiveCoinGIVE525.4 BlitzCoinBLITZ သို့ KoboCoinKOBO55.27 BlitzCoinBLITZ သို့ DarkTokenDT0.223 BlitzCoinBLITZ သို့ CETUS CoinCETI700.64
ငွေလဲနှုန်းကိုနောက်ဆုံးရေးသားချိန်: Fri, 14 Aug 2020 10:25:01 +0000.